We offer services in many languages, including:
Kow ka dhigida caafimaadka dumarka soo galootiga ah
Xarunta Caafimaadka Dadka Dhaqamada kala-duwan ee Dumarka (MCWH)
Xarunta Caafimaadka Dumarka ee Dadka Dhaqamada ala-duwan (Multicultural Centre for Women’s Health) waa ururka dumarka soogalootiga ah waxaana ka go’an hagaajinta caafimaadka iyo samaqabka dumarka soogalootiga ah ee Australia jooga.
Xarunta waxaa loogu talagalay dumarka soogalootiga ah kuwaas oo ay ku jiraan qaxootiga iyo kuwa magangelyada raadinaya iyo dumarka ka tirsan bulshooyinka wadanka la qabsaday iyo kuwa ku cusub.
Macluumaad afkaaga ku qoran
Waxaanu afka Soomaaliga ku bixinaa xisooyin waxbarasho oo la siiyo dumarka shaqadooda jooga ama bulshada dhexdeeda – meel kasta oo koox dumar ahi isugu yimaadaan. Barayaashayada caafimaadka waxaa loo tababaray inay ka bixiyaan waxbarasho caafimaad kuwaas oo ah mawduucyo khuseeya caafimaadka dumarka.
Waxaanu kaloo haynaa qoraalo badan oo ku saabsan caafimaadka kuna qoran Soomaali.
Adeegyada Dumarka soogalootiga ah oo ay bixiyaan dumar soogalooti ah b0 Nagula soo xiriir telefoon ama email:
adoo ku hadlaya Soomaali wixii khuseeya caafimaadka iyo arrimaha samaqabka
si aad ugu hesho xisado waxbarasho caafimaad oo Soomaali ah kooxa dumar ah
si aad u hesho macluumaad caafimaad oo Soomaali ku qoran
si aad u amaahato buugta caafimaadka dumarka oo Soomaali ku qoran.
Waxaan ku hadalnaa afkaaga
Haddii aad u baahan tahay mutarjum, fadlan wac Khadka Qaranka ee TIS oo ah 131 450 una sheeg inaad ku hadasho Soomaali. Waxay kuu raadin doonaan mutarjum khadka kugu caawima kuulana xiriira MCWH tel: 03 9418 0999.
Waxaanu kuu qabanqaabinaynaa Bare Caafimaadka oo ku hadla af Soomaali si uu kuu soo waco (isla maalintaas). Fadlan xasuuso waxaan joognaa halkaan Isniinta ilaa Jimcaha 10subaxnimo–4ta galabnimo.
Qof labada luqadood ku hadla oo jaalliyada bara caafimaadka
Somali Bilingual Community Health Educator
MCWH: Suite 207, Level 2, Carringbush Building
Telefoon: 03 9418 0999
Fakis: 03 9417 7877